Fiji: Adihevitra taorian’ny Fitontonganan’ny Sandambola · Global Voices teny Malagasy
Adihevitr'ireo blaogera mikasika ny fitontonganan'ny sandan'ny dolara fijiana.
Voadika ny 13 Avrily 2019 17:12 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, 繁體中文, 简体中文, Español, bahasa Indonesia, English
Eny tokoa, ny 15 Aprily 2009, nahenan'ny [amin'ny teny anglisy] Bankin-Tahiry ao Fiji 20% ny sandambola nasionaly, nahatonga azy ho mora kokoa raha ampitahaina amin'ireo vola vahiny hafa. Midika izany fa mila dolara fijiana bebe kokoa raha hividy entana afarana avy any ivelany. Fa ho an'ireo mpanfija vahiny, ho mora kokoa ireo entana sy tolotra fijiana.
Nandray tsara [pejy voafafa] ity fanapahankevitra ity ireo matihanina amin'ny sehatry ny fizahantany, satria hanintona kokoa ireo mpizahatany ny vidin-javatra mora kokoa. Saingy matahotra ny hiantefan'ity fampihenana ny sandambola ity any amin'ireo mahantra fadiranovana ireo sampandraharaha miahy ny fiarahamonina [pejy voafafa], raha toa ka vao nandidy ny fandehanan'ireo mpiasampanjakana rehetra maherin'ny 55 taona [pejy voafafa] hisotro ronono tsy misy hataka andro (ao anatin'ny dimby ambin'ny folo andro) ihany koa ny governemanta.
Mihevitra ity fitontonganan'ny sandambola ity ho toy ny iray amin'ireo fanapahankevitra henjana indrindra noraisin'ny governemanta fijiana ny Loyal Fijian [amin'ny teny anglisy]:
Tsy afaka ny handà isika fa manana olana lehibe, ry namana isany.
Efa naheno ary nanafina ny volany any an-dafy talohan'ity fanambarana ity ireo mpandaraharaha kinga saina. Handoa bebe kokoa ny zavatra afarana avy ay ivelany ireo olontsotra.
Handoa bebe kokoa ianareo amin'ny fotoana manaraka andehananareo miantsena sy mividy paty, trondro, ronono vovony sy izay zavatra hafa rehetra.
Ary manampy ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana izay efa mety ho tarehimarika roa angamba izao izany.
Tena efa voakasika mafy ny toekarena fijiana teo aloha, izay tena tsy azo nihodivirana noho ny lanjan'ireo korontana ara-politika niainantsika. Fa mbola tafiala tamin'izany tsy nisy firodanan'ny toekarena isika.
Ao amin'ny Twitter, nanoro hevitra ireo Fijiana mpila ravinahitra i gilbertfiji [bitsika nofafàna]:
Fijiana mila ravinahitra any ivelany? Izao no fotoana tsara andefasana vola any Fiji, taorian'ny fitontonganan'ny sandan'ny dolara fijiana.
Maneho hevitra manohitra ilay fampihenana ny sandambola ny lahatsoratra iray ao amin'ny Intelligentsiya [amin'ny teny anglisy]:
Angamba izao fikasàna lehibe izao no natao dia mba hisintonana vola vahiny ato amin'ny firenentsika fotsiny ka mamela ny ankamaroan'ireo mpiray tanindrazana amintsika hiady amin'ny vidin'entana miakatra 20% eo amin'ny entana afarana avy any ivelany. Ahitàna ireo entana sy tolotra fototra toy ny findramambola momba ny trano, ny sakafo (vary, lafarina, ovy), ny solika, ny fanafody, ny fitaovana fanamboarana, sns izany, ary iza ary no tsy maintsy hiatrika ireo tsy fahampiana sy ireo vokatra eo amin'ny fiarahamonina? Eny, ianao ry Bainimarama. Tsy maintsy hizaka ireo vidin-tsakafo afarana avo kokoa ihany koa ireo matihanina amin'ny sehatry ny fizahantany “tsy manao politika” (tsy adinonay ny fomba “tsy nikitihan”‘io vondrona famoretana io politika rehefa niady tamin'ilay volavolan-dalàna Qarase mikasika ireo qoliqolis [amin'ny teny anglisy]), ny famokarana eto an-toerana izay tsy mahafeno ny filàny.
Tsy mitombina ilay filazàna fa hiakatra ny fanondranantsika entana. Mihena am-pitoerana ny vokatra fanondrana fototra aty amintsika, ny siramamy, izay very mpanjifa fototra, dia ny Fiombonambe Eoropeana izany. Raha ny marina, manafoana ny fidirambola rehetra ny fiakaran'ny vidin'entana ao amin'ny firenena natao mba hanosehana ny fanondranana, toy ny asongadin'ilay mpahay toekarena Satish Chand amin-talenta.
Amin'ny ankapobeny, tsy hisy vola fanampiny hiditra ao amin'ny toekarentsika, ary ny filazan'ny Governoran'ny Bankin-Tahirin'i Fiji tsy mamim-bahoaka fa Isika, Vahoaka, dia tsy hizaka ny fiakaran'ny vidim-piainana mihoatra ny 12 volana, dia mampihomehy no sady tena fanatavezan-dresaka be tsotra izao. Inona no mbola azon'ity fitondrana tsy mamim-bahoaka ity trohina amin'ny vahoakany?
Ireo mahantra no tena ho voa mafy, hoy ny Raw Fiji News [amin'ny teny anglisy]:
Taorian'ny fampihenana 20% ny sandan'ny dolara fijiana, tokony hiakatra ny vidin'entana, na ny vidim-piainana ao Fiji, satria ho lasa lafo kokoa ireo sakafo sy ny entana afarana noho ny fitontonganan'ny sandan'ny dolara fijiana.
Midika izany fa hiakatra ny vidim-bary, ny lafarina, ny dite, sy ireo vokatra fototra sasany, izay handona mafy ny fitoerambolan'ireo mahantra indrindra.
Dia efa miomàna handoa lafo kokoa ho an'ireo tapakilan'ny fiara fitateram-bahoaka sy solika amin'ny herinandro ho avy, satria ho lafo kokoa ny solika rehefa vidiana, izay fanafarana fototr'i Fiji.
Fotoana izao hiverenana amin'ny tany sy hambolena ny sakafonao manokana.
Zavatra vokarina eto an-toerana vidiana, legioma sy voankazo, ary foano ao anatin'ny lisitry ny zavatra ho vidianao isan-kerinandro avokoa izay lafo be rehetra.
Tsindrian'ny Talking Fiji [amin'ny teny anglisy] fa ny fahatokisan'ireo mpampiasa vola no mitondra mankany amin'ny fampiasambola, fa tsy ny vola mora kokoa:
Raha izaho manokana aloha, tsy hitako hoe ahoana ny fomba ankaherezan'ny Bankin-Tahirin'i Fiji sy ny governemanta vonjimaika ireo fampiasambola vahiny amin'ny fampihenana ny sandan'ny dolarantsika, satria na iza na iza ny mpahay toekarena dia hiteny aminao fa hanimba antsika kokoa nóho ny hanasoa antsika izany.
Heveriko fa izany no antony mahatonga azy ho safidy ”farany” azy.
Hiverina any Fiji ihany ireo vahiny mpampiasa vola rehefa voavaha ity olana ara-politikantsika ity, rehefa hiverina any amin'ny tobiny ireo tafika miaramila ary rehefa tafaverina ny ara-dalàna sy ny demokrasia.
Ny fahatokisan'ireo mpampiasa vola no manintona ny renivola vahiny fa tsy ny fampihenana ny sandambola.
23 Janoary 2019Oseania